Sideed dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeyn Mareykanku uu ka fuliyay Shabeellaha Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSideed dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo lagu dilay duqeyn Mareykanku uu ka fuliyay Shabeellaha Hoose
December 16, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday Soomaaliya ay ku dileen sideed dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Duqeynta ayaa Sabtidii ka dhacaday deegaanka Gendershe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ma jirin wax dad rayid ah oo khasaare kasoo gaaray duqeynta, sida ay sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM).
Ilaa iyo sanadkan, Mareykanka ayaa ugu yaraan 40 duqeymood oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ka fuliyay qeybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya.
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa in uu khadka taleefoonka kula hadlo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu oo soo xiganaysa [...]